Kooxaha waaweyn ayaa todobaadkaan wada badiyay, Barcelona waxay 2-0 ku khaarijisay kooxda Girona oo ciyaarti xalay ku dhameysatay 10 laacib kaddib marki kaarka casaanka ah loo taagay ciyaaryahan Bernardo.
Barcelona goolka hore waxaa daqiiqadii 10-aad u saxiixay Nelson Semedo, halka goolka labaad uu dhaliyay laacibkooda Lionel Messi, waxuu goolkaasi ahaa kiisii 26-aad ee uu dhalinayo xilli ciyaareedkan.
Barcelona waxay hadda 5 dhibcood ka sareysaa kooxda Athletico Madrid oo Sabtdiii 2-0 ku garaacday Getafe. Waxaa sidoo kale guul muhiim ah soo hooysay Real Madrid oo 4-2 xalay ku dardartay Spanyol.
Labo ka mida goolasha waxaa u dhaliyay Kareem Benzema. Guushaasi ayaa u dirtay kooxda Real kaalinta saddexaad ee horyaalka La Liga, waxay booskaasi dib ugala wareegeen Sevilla oo Sabtidii kaalintaasi gashay marki ay 5-0 ku karbaashtay Levante.